A.K.N CONSTRUCTION GROUP: 2015
မင်းကြီး။ ။ ဟဲ့ ပေါ်ဦး အခု သမ္မတဖြစ်ချင်နေတာ မိန်းမလား ယောက်ျားလား
ပေါ်ဦး။ ။ မိန်းမပါဘုရား
မင်းကြီး။ ။ ဟဲ့ သူ့ချည်သာလော
ပေါ်ဦး။ ။ ခိုးဝင်ကုလားတွေကို တရားဝင်နိုင်ငံသားဖြစ်ရေး မျိုးစောင့်ဥပဒေ ဖျက်သိမ်းရေး ပုဒ်မ၅၉ စ ကို ဖျက်သိမ်းရေးတို့နဲ့ ပါ ဘုရား
Posted by တောင်တမန်နယ်စား at 11:33 PM No comments:
Posted by တောင်တမန်နယ်စား at 10:34 PM No comments:
နှစ်ပေါင်း ၃၀ မျှ လျှို့ဝှက်အဆင့် သတ်မှတ်ခဲ့သည့် ရွေ့လျားဒုံးကျည်စနစ်တစ်ခု၏ သရုပ်မှန်ကို အစ္စရေးစစ်တပ်က အများပြည်သူထံ ဖွင့်ချပြလိုက်ကြောင်း သိရှိရသည်။
အစ္စရေးစစ်တပ်က Perehဟု ခေါ်ဝေါ်သည့် လက်နက်မှာ ရွေ့လျားနိုင်သည့် ဖျက်အားပြင်း ဒုံးကျည်စနစ်တစ်ခုဖြစ်သည်။ ယင်းလက်နက်သည် တင့်ကားများကို ချေမှုန်းရာတွင် အလွန်ထက်မြက်သည့် စွမ်းဆောင်ရည်မျိုး ရှိသည်။
သို့သော်လည်း အစ္စရေး စစ်တပ်က Perehကို ထင်ထင်ရှားရှား မဖြစ်အောင် ဖုံးကွယ်ထားပြီး ရှေ့ဘက်တွင် အမြောက်အတု တစ်လက်ကို တပ်ဆင်ထားသည်။ ထို့ကြောင့် Perehသည် အစ္စရေး ကြည်းတပ်သုံး M60 Patton တင့်ကားနှင့် ဆင်တူသွားပြီး ယင်းလက်နက်မျိုး ရှိနေသည်ကို လျှို့ဝှက်ပြီး ဖြစ်နေခဲ့သည်။ ဒုံးကျည်ပစ်စင်မှာ ယာဉ်၏ အနောက်ပိုင်းတွင် ရှိနေပြီး ပစ်မှတ်ကို ချိန်ရွယ်သည့် အခါတွင်မှ ပစ်စင်က ထောင်မတ်လာအောင် စီမံထားခြင်း ဖြစ်သည်။
အစ္စရေး စစ်တပ်သည် Pereh လက်နက်စနစ်ကို ၎င်းတို့၏ အဓိက တိုက်ပွဲဝင် တင့်ကားများနှင့် ရောနှော ချီတက်စေကာ ပုံဖျက် လျှို့ဝှက်ထားသည်မှာ နှစ်ပေါင်း ၃၀ မျှ ကြာမြင့်ခဲ့ပြီ ဖြစ်သည်။ “အစ္စရေးအတွက် အမှုထမ်းခဲ့တဲ့ အထူးလက်နက် စနစ်တစ်ခုကို အခုတော့ ပြည်သူတွေဆီ အသိပေးလိုက်ပါပြီ။ Pereh တင့်ကားရဲ့ လျှို့ဝှက်ချက်ကို နှစ်ပေါင်း ၃၀ လောက် ထိန်းသိမ်းထားခဲ့တာပါ”ဟု အစ္စရေး စစ်တပ်က ကြေညာခဲ့သည်။
“ဒီတင့်ကားဟာ Tamuz တင့်ကားဖျက် ဒုံးကျည်တွေ ပစ်လွှတ်ဖို့အတွက် သေသေချာချာ အထူးပြု စီမံထားတာ ဖြစ်ပါတယ်”ဟုလည်း ကြေညာချက်တွင် ဖော်ပြထားသည်။ Perehသည် အမေရိကန်လုပ် M48နှင့် M60 တင့်ကားများကို အစ္စရေး နည်းပညာဖြင့် အဆင့်မြှင့်တင်ထားသည့် Magachစီးရီး တင့်ကားများပေါ်တွင် အဓိက အခြေခံ တည်ဆောက်လေ့ ရှိသည်။
ဒုံးကျည်ပစ်စင်ကို ရုတ်တရက် မမြင်နိုင်အောင် တည်ဆောက်ထားပြီး Pereh တစ်စီးလျှင် ဒုံးကျည် ၁၂ စင်းထိ တင်ဆောင် ပစ်ခတ်နိုင်အောင် အစ္စရေးက တီထွင်ခဲ့သည်။ “အစ္စရေး စစ်လက်နက်ပစ္စည်း ထုတ်လုပ်ရေး ပညာရှင်တွေက Perehမှာ အထက်ကို မြှင့်တင်နိုင်တဲ့ ပစ်စင်နဲ့ Tamuz ဒုံးကျည်တွေ ပစ်ခတ်နိုင်ဖို့ ရေဒါစနစ်တွေကို ထည့်သွင်း ပေးနိုင်ခဲ့ပါတယ်”ဟုလည်း အစီရင်ခံစာက ဆိုသည်။ ရှေ့ဘက်တွင် အမြောက်အတု တစ်လက်ကို တပ်ဆင်လိုက်သည့်အခါ သမားရိုးကျ တင့်ကားတစ်စီးသဖွယ် ဖြစ်သွားသည်။
ယာဉ်၏ ရှေ့ဘက်ပိုင်းကို အားဖြည့် သံချပ်ကာများ တပ်ဆင်ကာ တစ်ဖက်မှ ပစ်ခတ်မည့် တင့်ကားဖျက် ဒုံးကျည်များ၏ ဒဏ်ကို ခံနိုင်အောင် ပံ့ပိုးထားသည်။ Pereh တင့်ကား၏ ဓာတ်ပုံကို အများပြည်သူ ရှေ့မှောက်သို့ ၂၀၁၄ ခုနှစ်၊ ဇူလိုင်လတွင် စတင် ပြသခဲ့သော်လည်း ယင်းနှင့် ပတ်သက်သည့် အသေးစိတ် အချက်အလက်များကိုမူ အစ္စရေး စစ်တပ်က မထုတ်ပြန်ခဲ့ချေ။
Perehသည် ပြီးခဲ့သည့် ၂၅ နှစ်မျှ ကာလအတွင်း အစ္စရေး ကြုံခဲ့သည့် အဓိက စစ်ရေးလှုပ်ရှားမှုတိုင်းတွင် ပါဝင် အမှုထမ်းခဲ့သည့် မဟာဗျူဟာ စစ်လက်နက် တစ်ခုလည်း ဖြစ်ခဲ့ကြောင်း သိရှိရသည်။
Source ; 7day journal
Posted by တောင်တမန်နယ်စား at 10:10 PM No comments:
Posted by တောင်တမန်နယ်စား at 7:33 AM No comments:
မလေးတွင် တရုတ်နှင့်ကုလား ပြသာနာ ဖြစ်နေ၍ မြန်မာတို့သတိထားနေစေလို။
မလေးရှားရှိ Low Yat ဟုခေါ်သော ဈေးရုံကြီးတခုတွင် မလေးလူမျိုး မွတ်ဆလင် ဘာသာဝင် လူငယ်ကဖုန်း ဆိုင်မှ Mobile Phone တလုံးခိုးယူမှုကို ဝိုင်းဝန်းဖမ်းဆီးပြီး ကျူးလွန်သူအား ရဲအားလွဲအပ် ပေးခဲ့ခြင်းအပေါ် မလေး လူများစု မွတ်ဆလင်ဘာသာဝင် များမှ မကျေနပ်၍ လူမျိုး ရေးပြသာနာ တရပ်ဖန်တီးသည်ဟုသိ ရသည်။
ယခုဖြစ်ပွားနေသော အခြေအနေ၌ လူမျိုး ခြား၊ဘာသာခြား တရုတ်လူမျိုးဆိုင်များ ကို ဖျက်ဆီးလုယက်နေကြောင်း သတင်းရပါ သည်။ သို့ရာတွင် လုယက်လိုသောအ ခြေ ခံသဘောကြောင့် တခြားဘာသာခြား လူမျိုးခြား မြန်မာများကိုလဲ လုယက်နိုင် သဖြင့် မြန်မာတို့အထူးသတိထား နေထိုင် ရန် မလေးရောက် မြန်မာများကို သတ်ိ ပေးပန်ကြား ပါတယ်ခင်ဗျာ။
မလေးရောက် မြန်မာအားလုံး ဘေးကင်း ရန်ဆုမွန်ကောင်း တောင်းလိုက်ပါ တယ်ခင်ဗျာ။
Posted by တောင်တမန်နယ်စား at 7:42 AM No comments:
Posted by တောင်တမန်နယ်စား at 7:28 AM No comments:
No.1 Flying Training School added4new photos.
SR-71 Black Bird (ငှက်မဲ) ၏
မောင်းသူမဲ့ SR-72 Son of Black Bird
..... Lockheed Martin
အမေရိကန်လေတပ်အတွက် ထုတ်လုပ်ရန် ရည်ရွယ်ထား
၁၉၆၆ မှ ၁၉၉၈ ထိ ဆယ်စုနှစ်များစွာ တာဝန်ထမ်းဆောင်ခဲ့သော SR-71 နေရာတွင် အစားထိုးရန်။ ၁၉၉၈ နောက်ပိုင်း SR-71 အနားပေးပြီး နည်းပညာမြင့် SR-72 ကို တီထွင်ထုတ်လုပ်ရန်ကြိုးပမ်း။
Drone နည်းပညာတိုးတက်လာမှု နှင့်အတူ
မဉ္စမမြောက် မောင်းသူမဲ့ ကိုယ်ပြောက်ဂျက်တိုက်လေယာဉ်
(5th generation stealth jet fighter)
၂၀၀၇ မှာထုတ်လုပ်ခဲ့ပေမယ့် အစီရင်ခံစာအရ အတည်မပြု နိုင်သေး။ ၂၀၁၃ နိုဝင်ဘာ ၁ရက်နေ့ထုတ် Aviation Week and Space Technology မဂ္ဂဇင်းမှာ SR-72 အကြောင်း ပုံနှိပ်ထုတ်ဝေခဲ့။
SR-72 drone ၏ စွမ်းဆောင်ရည်များမှာ အံ့မခန်းထူးခြားပြောင်မြောက်၍ သွက်လက်ထက်မြက်လှသည်။ SR-72 drone သည် အလွန်မြန်ဆန်းသော အရှိန်ဖြင့် ထောက်လှမ်းရေးပြုလုပ်နိုင်ခြင်း၊ ကင်းထောက်စောင့်ကြည့်မှုများ ပြုလုပ်နိုင်ခြင်း၊ လျင်မြန်စွာပျံသန်းနေစဉ် ရန်သူ့ပစ်မှတ်များကို ဒုံးကျည်ဖြင့် ပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်ခြင်း၊ အပြင် ကမ္ဘာပတ်လမ်း အတွင်းရှိ ထောက်လှမ်းရေးနှင့် ဆက်သွယ်ရေး ဂြိုလ်တုများအား ဆက်သွယ်ရေးကွန်ရက်ဖွဲ့ကာ ပူပေါင်းဆောင်ရွက် နိုင်သည့် စွမ်းဆောင်ရည်များ ရှိသည်။
Ref; wiki SR-72
Sitt Phyo Aung
Posted by တောင်တမန်နယ်စား at 11:08 PM No comments:
၁၉၉၉-ခုနှစ်မှာတော့ ချန်ဒူးကုမ္ပဏီဟာ Super-7 Project ကို FC-1/ JF-17အဖြစ် ၎င်းတစ်ဦးတည်းလုပ်ဆောင်ခဲ့ပြီး ၎င်းနှစ်မှပင်တရုတ်နဲ့ ပါကစ္စတန်တို့ဟာ တစ်ဘက်ကို ၅၀% နှင့် ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရန် သဘောတူခဲ့ကြပါတယ်။ ရုရှား မီကိုယန်ကုမ္ပဏီကလည်း ထောက်ပံ့မှုအချို့ ပြုလုပ်ပေးခဲ့ပါတယ်။
၂၀၀၇-ခုနှစ်၊ မတ်လတွင် ပထမဆုံး JF-17 (၂)စီးကို ပါကစ္စတန်သို့ ပို့ဆောင်ပေးနိုင်ခဲ့ပြီး၊ ၂၀၀၈-ခုနှစ်တွင် နောက်ထပ် (၆)စီး ထပ်မံပို့ဆောင်ပေးခဲ့ပါတယ်။ မူလထုတ်လုပ်သည့် (၅၀)စီးကို Block-I အဖြစ်သတ်မှတ်ပြီး၊ ဒုတိယအသုတ်ဖြစ်သည့် အစီး (၅၀) ကိုမူ အနည်းငယ်အဆင့်မြှင့်တင်ခဲ့ပြီး Block-II အဖြစ်ဆက်လက်ထုတ်လုပ်မှာ ဖြစ်ပါတယ်။ ပါကစ္စတန်လေတပ်အနေဖြင့် စုစုပေါင်း (၂၅၀)စီး မှာယူထားပြီး၊ ၂၀၁၂-ခုနှစ်အထိ ပထမအသုတ် Block-I အစီး (၅၀) လက်ခံရရှိပြီး ဖြစ်ပါတယ်။ နောက်ထပ်ထုတ်လုပ်မည့် Block-II အစီး (၅၀)ကို ၂၀၁၃-ခုနှစ်အတွင်း စတင်ထုတ်လုပ်ပြီး၊ ၂၀၁၄-ခုနှစ် မေလ နှင့် ဇွန်လအတွင်း စတင်လက်ခံရရှိမှာ ဖြစ်ကြောင်း သိရှိရပါတယ်။ ၂၀၁၆-ခုနှစ်တွင်တော့ Block-III ကို စတင်ထုတ်လုပ်မယ်လို့ ဆိုပါတယ်။ FC-1/JF-17 ကို ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်၊ အီရန်၊ အီဂျစ်နှင့် နိုက်ဂျီးရီးယား နိုင်ငံတို့မှ ၎င်းတို့၏ F-5, Dassault Mirage III-5, Shenyang J-6, MIG-21/F-7, Nanchang Q-5 / A-5 များနေရာတွင် အစားထိုးရန်အတွက် ဝယ်ယူရန် စိတ်ဝင်စားလျှက်ရှိကြောင်း သိရှိရပါတယ်။
ရန်သူမိတ်ဆွေခွဲခြားစနစ် (Identification of Friend and foe (IFF)) -- မြင်ကွင်းလွန်အခြေအနေတွင်ပင် ရန်သူမိတ်ဆွေခွဲခြားနိုင်သည့်စနစ် (IFF interrogator for target verification at the BVR range)
built-in symbol generation capability ပါဝင်သည့် smart Heads-Up Display (H built-in symbol generation capability ပါဝင်သည့် smart Heads-Up Display (HUD) တပ်ဆင်ထားပါပြီး HOTAS စနစ်လည်း ပါဝင်ပါတယ်။
င်္FC-1/JF-17 တွင် ရုရှားထုတ် MIG-29 တွင်အသုံးပြုလျှက်ရှိသည့် RD-33 အင်ဂျင်မှ ဆင်းသက်လာသည့် Kilmov RD-93 တာဘိုဖန်အင်ဂျင်တစ်လုံး တပ်ဆင်ထားပါတယ်။ နောက်ပိုင်းတွင် RD-93 ကိုအခြေခံတည်ဆောက်ထားသည့် တရုတ်ထုတ် WS-13 အင်ဂျင်ဖြင့် အစားထိုး တပ်ဆင်မယ်လို့ သိရှိရပါတယ်။ JF-17 Block-II
တန်ဖိုး - အမေရိကန်ဒေါ်လာ ၁၅ ~ ၂၀ သန်း / ၂၀
Credit : ko mm.
Posted by တောင်တမန်နယ်စား at 7:12 AM No comments:
RUSSIA S 400 MISSLE
Posted by တောင်တမန်နယ်စား at 7:43 AM No comments:
HQ-9 ဒုံးပျံစနစ်ဟာ တရုတ်ပြည်သူ့သမ္မတနိုင်ငံထုတ် တစ်ခုတည်းသော တိုက်ချင်းပစ်ဒုံးပျံကာကွယ်ရေး နှင့် ရေဒါပျောက် လေယာဉ်များကို ချေမှုန်းနိုင်သော ဒုံးပျံစနစ်ပါ။ ဒါ့အပြင် အီလက်ထောနစ်နှောက်ယှက်မှု များဖြင့် မတားဆီးနိုင်သော Antjamming & antiradiation စနစ်များအပါအဝင် ကိုယ်ပိုင်ရေဒါလမ်းညွန် စနစ်ပါဝင်သော ဒုံးပျံများ ဖြစ်ပါတယ်။ နေတိုးအဖွဲ့ဝင် နိုင်ငံဖြစ်တဲ့ တူရကီနိုင်ငံက နှစ်ပေါင်းများစွာ ပိတ်ဆို့ထားခဲ့သော တရုတ်နိုင်ငံ ကာကွယ်ရေး စက်ရုံများထံမှ စနစ်၁၂ခုထိ နည်းပညာပူးပေါင်းထုတ်လုပ်ရန် ကမ်းလှမ်းခံခဲ့ပြီး နာမည်ကြီးခဲ့သော စနစ်လဲဖြစ်ပါတယ်။ HQ-9 သို့မဟုတ် မီးလျံနီ လို့ နာမည်တွင်တဲ့ လေကြောင်းရန် ကာကွယ်ရေး စနစ်များကို ရုရှားနိုင်ငံရဲ့ S-300 အမေရိကန်ရဲ့ MIM-104 Patriot တို့ကို လေ့လာကာ ၁၉၉၀ပြည့်လွန်တွင် CPMIEC ကုမ္မနီမှ ထုတ်လုပ်ခဲ့ပါတယ်။ ၁၉၉၀ပြည့်လွန် နှစ်များဆီက တရုတ်ပြည်သူ့သမ္မတနိုင်ငံဟာ ရုရှားနိုင်ငံမှ S-300P နှင့် S-300V အမျိုးအစားများကို ဝယ်ယူအသုံးပြုခဲ့ပြီး၊ စနစ်များတွင် တွဲဖက်ကာ ပြည်တွင်းဖြစ် ဒုံးပျံများအသုံးပြုနိုင်ရေး စတင်ကြိုးပမ်းရာမှ ကိုယ်ပိုင် စနစ်တစ်ခု ထုတ်လုပ်နိုင်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။
Posted by တောင်တမန်နယ်စား at 7:31 AM No comments: